Water Wise - Ukungcoliswa kwamanzi (pollution) kanye nempilo yakho
Ukungcoliswa kwamanzi (pollution) kanye nempilo yakho
Amanzi awanamincele njengoba egeleza, axhumanisa imiphakathi ngokusetshenziswa kwawo okwehlukene. Ikhwalithi yomfudlana noma umfula kuvamise ukuba yinkomba enhle yendlela yempilo emphakathini., lapho imifudlana nemifula egeleza khona Lokhu kuyinkomba yesimo sempilo nezomnotho sabantu kanye nokuqondisisa ngezemvelo kanye nomqondo ngokusetshenziswa kwayo. Yonke into eyenzeka kwindawo ekhongozela amanzi ikhombisa ikhwalithi yamanzi ageleza kuleyo ndawo, ngoba umphumela wokwenziwa ngabantu kanye nenhlobo yempilo yabo, kugcina kuphelele emfuleni, kanti kudlule kuleyo ndawo kugelezele ngezansi.
Izikhongozelo zomfula zibandakanya wonke umhlaba ozungeze lezo zindawo, ukusuka ezintabeni ukuya ogwini lolwandle, ezithululwa umfula owodwa kanye nemifudlane yawo.
Imifudlana enempilo, amaxhaphozi kanye nemifula isekela izinhlobo ezehlukene zezinto eziphila emanzini. Amanzi emvula kanye nemifudlana eyehla ngezintaba iqukethe izinga eliphezulu le-oxygen. I-oxygen eningi ivela kwi-athimosfiya iza nemvula, igeleze namanzi ageleza ngesivinini kwimifudlana kanye ne-photosynthesis. Izicucwana zama-nutrient zigezelwa kwimifula nemifudlana, ukunikeza amakhemikhali akhulisa izinto (isibonelo, ama-nitrate) kanye nezinto eziwumthombo wokudla (isibonelo, izimila ezibolayo). Izimila zamanzi zenza ukudla ngelanga (photosynthesize), kanti lokhu kuhlinzek akakhulu izinto eziphila emanzini i-oxygen eyenza ukuthi ziphile zihlangane nezinye izinto eziyimpilo.
Zonke izinto eziyimpilo emanzini zincike ekuxhumaneni nasekusebenzisaneni kwezinto okwenzeka emanzini kanye nakwindawo ezungeze izikhongozeli zamanzi. Lezi zinqubo zingenza ukuthi kube ne-ecosystem enempilo noma ukuphazamisa izinqubo ze-ecology kanye nokuba nomphumela omubi emanzini. Imifula kanye nemifudlana kukhona ngenxa yokuba nezikhongozeli zamanzi kanye nobudlelwane phakathi kwemvula nomhwamuko (i-evaporation). Imifula iyinqubo evulekile lapho khona kunokushintshana kwe-material ne-eneji kwisimo semvelo futhi okwenzeka njalo ngokuqhubekayo. Kunzima ukuphatha imifula njengenqubo yama-ecosytem ngoba yimigudu ebalulekile yokugeleza kwe-eneji kanye nokuzunge-zungeza kwama-nutrient kwimingcele yezinto ezihlala khona.
I-ecosystem yindawo lapho okuphila khona izimila, izilwane, abantu kanye nezindawo ezizungeze lokhu, konke lokhu kuyaxhumana ngobudlelwane obuhluka-hlukene, isibonelo, ichibana (pond).
Izinguquko kwikhwalithi yamanzi ziyazenzekela ngokwemvelo ebudeni bomfula, kodwa lezi zinguquko zingachaphazelwa ngokwenziwa ngabantu. Izimboni, ezolimo, kanye nokuhlala kweningi labantu emadolobheni, kubanga ukuthi kube nokuqoqana kwama-nutrient (indle yabantu kanye nama-fertiliser) kanye nodoti onobuthi (toxic substances) isilinganiso salokhu (izinto ezingcolisa amanzi eziwushevu) ezingaba nomphumela omubi kwikhwalithi yamanzi.
Yini amanzi angcolisiwe (polluted water)?
Ikhwalithi yamanzi ichazwa njengamanzi aphephile, aphuzekayo, kanye nawusizo kuzo zonke izinto eziyimpilo emhlabeni. Kumele angabi nawo amakhemikhali noma ama-radioactive substance, ayingozi kwimpilo yanoma yiziphi izinto. Kumele angabi nazo iziphili ezingabanga izifo kanti futhi azinze maqondana nezinto ezihezuvayo noma ezicwecwayo (corrosion or scaling). Amanzi angcolisiwe (polluted water) ngamanzi angaphephile kanti futhi angenayo impilo kubantu nezilwane ukuwaphuza noma ukugeza ngawo. Amanzi angcolisiwe ayingozi kwizimila zasemanzini kanye nezilwane. Amanzi angcolisiwe (polluted water) ayingozi kakhulu kubantu abathola amanzi abo emifuleni noma emadanyini. ENingizimu Afrika, amanzi afreshi ayaphunguleka ngoba aya ngokungcoliswa kakhulu, kanye nokoniwa kwezindawo ezikhongozela amanzi okubangelwa ukuhlala kwabantu abaningi emadolobheni, ukuqedwa kwezihlahla, ukwenziwa kwamadamu emifuleni, kanye nokoniwa kwezindawo zamaxhaphozi, izimboni, izimayini, ezolimo ukusetshenziswa kwe-eneji kanye nokungcoliswa kwamanzi okwenzeka ngengozi. Njengoba inani labantu landa, kukhona nokwanda kokungcoliswa kwamanzi nomoya kanye nokoniwa kwezindawo ezikhongozela amanzi.